ထောက်ပံ့ရေး R8 Collets, R8 ER Collet Chuck, Precision R8 Collets, R8 Collet Chuck သင့်လိုအပ်ချက်များမှ
Home > ထုတ်ကုန်များ > နွေဦး ColletsR8 Collets
R8 Collets ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, R8 Collets, R8 ER Collet Chuck ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Precision R8 Collets R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
SDC Collets clamping High Quality 65Mn
စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း R8 ပတ်ပတ်လည် collet R8 ကြိတ် collets
တိကျပြတ်သားမှု 3mm 65Mn R8 Collets
SDC Collets clamping High Quality 65Mn 65Mn Clamp Collets အထူး 65Mn Spring သံမဏိပစ္စည်းများ၏ 1.Made စွမ်းရည်, တိကျသောတိကျမှန်ကန်မှု clamping 2.Power ပျင်းစရာ, ကြိတ်, တူးဖော်ခြင်း, နှိပ်, ကြိတ်နှင့်ထွင်းထုစစ်ဆင်ရေးများအတွက် 3.Used High Quality SDC Collet SDC Collets နှင့်အခွံမာသီးအဘို့အ installation ညွှန်ကြားချက်များ...
စက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း R8 ပတ်ပတ်လည် collet R8 ကြိတ် collets R8 Mills Collets 1. ပစ္စည်း: 65Mn 2. ခွန်အား: HRC44-48 3. တိုးတက်မှု 1mm သို့မဟုတ် 1/64 "ခြေလှမ်း 4. ရိုးသားစွာဝန်ဆောင်မှု R8 က Round Collets လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ R8 Collet High Quality Collet, တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ်...
တိကျပြတ်သားမှု 3mm 65Mn R8 Collets လည်းနွေဦး collet အဖြစ်လူသိများ R8 Collets တစ်ဦးလေ့ကျင့်ခန်း \_ ကြိတ်စက်, တူးဖော်ခြင်းနှင့်ကြိတ် Chuck ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ယင်း၏ function ကိုလေ့ကျင့်ခန်းရှုးသို့မဟုတ်ဓားညှပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် collet လက်ရှိလူသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်,...
တရုတ်နိုင်ငံ R8 Collets ပေးသွင်း
2.Hardness: တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း clamping: HRC55-60
elastic တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း: HRC40-45
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ X6325 X5325 အဖြစ်ဗိုင်းလိပ်တံ taper ပေါက် R8 ဖြစ်သောကြိတ်စက်, အပေါငျးတို့သ aorts သက်ဆိုင် 3.This ယူနစ်